Waxa la sheegay in gobolka wolega dagmada giidha ayaana ay kooxda onag shane ee hubaysani ay af duubteen 70 qof - ዜና ከምንጩ
Waxa la sheegay in gobolka wolega dagmada giidha ayaana ay kooxda onag shane ee hubaysani ay af duubteen 70 qof
Waxa wargayska addis maleda uu waramay dad ku nool degaanka oromiya bariga gobolka wolega dagmada giidha ayaana waxaana ay sheegeen in kooxda onag shane ay halkaasi ku af duubteen 70 qof.
Sida ay sheegeen dadkaasi uu waramay wargayska waxa dadkaasi lagu af duubtay wararka sheegaya in ay caawimo bixiinayaan oo ay maqleen kooxdaasi.
Waxaana dadkan la af duubtay 15kii bishan tiqimt ee 2014ka ayaga oo kala saran laba bas oo rikaab ah oo ka soo baxay magalada anger gutin oo uu socday magaalada naqamt meel kalabaydh ah inta ay ku sugeen ayay ka af duubteen. Sida ay dadka halkaasi ku nool ay ku sheegeen hadaladooda ayaa ah dadkaasi la af duubtay ee basaska ku jiray in ay uu kaxaysteen meesha la yidhaahado waro alaltu kooxdaasi.
Waxa kale oo la sheegay in dadkaasi la sheegay in ay af duubteen kooxdaasi argagaxisada ahi ee labadaasi bas kala saarna waxa ay isgu jireen haween caruur yar yar iyo waayeel oo 70 qof ahaa.
Waxa ay sheegeen dadkii halkaasi ku noola in dadka la af duubtay qaar ka mid ah la garanayo, waxaana ka mid ahaa dadkaasi la garanayo haweenay la yidhaahdo Alemnesh Amaare oo wadatay laba caruur ah oo dadoodu ay kala ahayd ka uu yar sideed bilood iyo ka waynina labo sano iyo sideed bilood. Waxa kale oo ay wargayska uu sheegeen in ay ku jireen dadkaasi dadka kala ah Mulu Yenehun, Birte Yenehun, Amaare Fikaadhu, Azmera Aleliny iyo qaar kale oo aan la garanayn meel ay ku danbeeyeen.
Ilaa intii warbixintan la soo diyaariyay dadkaasi la af duubta waxa ay ku suganyihiin lagama war hayo, sida ay sheegeen dadka halkaasi dagan hada ka hor dadka la af duubto ee ay kooxda hubaysani af duubato nolal kuma soo noqdaan, waxa kale oo ay yidhaahdeen dadkanina in ay noolal ku soo noqon doonaan uma malaynayno.
Sida ay sheegeen dadkii halkaasi ku noola marka aan ka codsano ciidanka qaranka in ay ilaalo noo samaeeyan waxa ay noogu jawaaban xaga dawlada amar nalagama siiniin wax talaabo ah oo ay qaadanna ma jirto. Dadkii guryahooda ka qaxay ee uu cararay meelaha uu dhaw ayaa yidhi arinta ku saabsan dadka la af duubtay waxa aan uu sheegnay duqa magaalada marki aan jawaab ka waynay waxa aan uu tagnay taliyaha booliska waxaanan ka codsanay caawimo balse wax in ay noo qabtan maaysan ogolayn.
Dadka ku nool magalada anger gutin waxa ay sheegen in hada ka horba ay weeraro ku soo qaadi jireen kooxda hubaysan ee shane, waxaana la ogsoonyahay in marar badan ay ka hadleen arintaasi, intii aan la af duuban dadkaasi ka horna waxa aan ogaysiinay arintan cida ay khusayso oo wax aan uu sheegnay in ay ilaalo noo sameeyaan balse madama aan wax nalooga qabtay aanay jirin ayay arintani ku dhacday.
Sida ay ku sheegeen hadalkooda dadkii halkaasi ku noola ayaa ah in dadkii la af duubtay ay basaska la saarnaayeen dad kale oo aan tiradooda saxsan la garanayn oo ku noola isla magaaladasi, 10 ka mid ah dadkaasi oo qoomiyada oromada ahaana waa la siidayay, waxa halkaasi lagula haysta dadkii uu dhashay qoomiyada amxaarada imika waxa ay ku suganyihiin kama war hayno.
Waxa ay wargayska uu sheegeen oo kale in ay rajaynayaan in cida ay khusayso arinta ay dadkaasi uu soo gurman doonaan, waaxaana ay yidhaahdeen dadkaasi la af duubtay dawladu ha uu so gurmato.
Wargayska addis maleda ayaa isku daayay in uu xog ka soo helo arintan waxaana uu taliyaha booliska shaambal Kumsa Mekoonin uu tilifoon kula xidhiidhay, balse shaambalku waxa uu ugu jawaabay wargayska wax dhacay aan ka war haynaa ma jiraan kadibna waxa uu xidhay tilifoonkiisi waxaan uu wargaysku isku dayay in uu ku celceliyo tilfoonkiisa balse maadama uu xidhay tilifoonkiisa uma soortoobin in wargaysku uu war ka helo.
Waxa xusid mudan in hada ka hor uu wargayska addis maleda uu ka soo waramay dadkii lagu laayay gobolka beriga wolega dagmada giidhaana ayaana sadex beero falato ah, dagmada kiiraamu qabalaha wulmaay 50 qof in ka badan oo rayd ah iyo isla dagmadaasi magaalada adhiis alem 60 qof oo rayd ah in ay kooxda shane ay ku layaayeen.
Total views : 7512136